Scams & Safety - Aoka ho marim-pototra ny heloka
Ny Internet dia feno olona samihafa manana fikasana maro. Tahaka ny olona marotranonkala ara-barotra sy bilaogy, ny hafa dia mampiasa hatrany ny fotoanany amin'ny fanaovana fomba hanaovana ny asa tsy ara-dalàna. Rehefa manao tranokala isika,dia mifantoka amin'ny fanaterana ny serivisy izahay ary koa ny traikefan'ny mpampiasa iray rehefa mampiasa ny tranokalanareo izy ireo. Ny ankabeazan'ny tranonkala fampivoaranadia miditra amin'ny sehatra ara-barotra amin'ny Internet sy ny endriny toy ny Search Engine Optimization (SEO), ny fampiroboroboana UX ary ny fampivoarana ny votoatinytoy ny fampiroboroboana ny tranokala.
Mivoatra ny fitaovana izay mampiasa hackers, ary mihatsara hatrany hatrany izy ireoavy amin'ny dikan-teny teo aloha rehefa mandeha ny fotoana. Zava-dehibe ny mitadidy ny fomba fampiasa hackers ampiasaina toy ny teknika hafa izay mahombyny sehatry ny hacking ary ny fanamafisana ny fiarovana ny fampiasana aterineto - aspiratore bagno vendita. Ny ankamaroan'ny hosoka amin'ny aterineto dia mifototra amin'ny asan'ireo hackersary mpaneso.
Zava-dehibe ny ianarana ny sasany amin'ireny fanafihana ireny ary miaro azy ireo.
Jason Adler, tompon'andraikitra eo amin'ny Customer Success of Semalt ,mamelabelatra ny fanafihana amin'ny aterineto mahazatra.
Ity heloka bevava ity dia ny mandefa hafatra sy mailaka izay tsy tadiavina.Ireo mpampihorohoro dia mampiasa teknika toy ny fanafihana phishing na baomba sy fanodinana. Amin'ny tranga hafa dia mampiasa rohy izay mety hampidi-doza ny scammersna mampiasa viriosy. Azon'izy ireo atao ny mandefa tratra miaraka amin'ny trozona. Rehefa manokatra azy ireo izy ireo, dia afaka manafika ny browser-ny ary manangona ny tenimiafin'ny mpampiasa maroary fampahalalana manokana hafa. Zava-dehibe ny fampiasana filaharam-be amin'ny spam avo indrindra ary mampiasa mpampiasa mailaka azo antoka..Araho ny tenimiafinaodia matanjaka ary ny plugins dia efa vita.
Ity fanafihana mahafinaritra ity dia mampiasa ny vintana hahazoana tranonkala malaza. Ny sasanytranonkala manana kaody PHP dia manana fahabangan'ny SQL. Ny sasany amin'ireo tahiry dia azo jerena amin'ny alàlan'ny fampiasana ity fomba fanasoketana ity. Ankoatra izany, SQLNy injection dia mamela ny hacker hamaky ny fampahalalana rehetra atolotra amin'ny server iray amin'ny andalana sy andalana. Ity fanararaotana ity dia mety hahatonga ny tranokala ho mora vaky.Ny sasantsasany amin'ireo fampahalalam-baovao mety hitranga amin'izany fomba izany dia ahitana ny fampahalalana momba ny carte de crédit.
Crossing Site Scripting (XSS)
Io fanafihana io dia manatanteraka ny sasany amin'ireo hosoka amin'ny aterineto. Ny XSS dia mampiasa nysehatra an-tsoratra mba handefa soratra amin'ny tranonkala hafa. Tsy toy ny fanafihana botnet, XSS dia mahazo fahazoana mankany amin'ny daty ahafahana manatratra ny traikefa rehetrasomebiseby erỳ. Ny Hackers dia afaka mangalatra fampahalalana momba ny carte de crédit amin'ny alalan'ny XSS. Amin'ny tranga hafa dia azon'ny olona atao ny mandà ny fiarovana ny tranonkala amin'ny alàlan'ny hackingizany. Ankoatr'izay, ny ezaka SEO dia tsy afaka mitondra voankazo ao amin'ny tranonkala iray mikaroka ny fiheverana fa tsy matoky tena.
Ny Internet dia feno olana sy olana maro. Ambonin'izany, misy ny hafafanentanana sy antony manosika ny ankamaroan'ny mpampiasa aterineto. Ny ankabeazan'ny tranonkala dia mitranga tsy misy hackers sy hosoka aterineto ao an-tsaina. Vokatr'izany, nyNy fanamafisan'ireo singa ao amin'ny tranonkala dia mifantoka amin'ny fanatontosana ny serivisy ary koa ny fahombiazan'ny fividianana ny tranokala. Na izany aza, misyfepetra madinika mba hisorohana ireo hackers. Azonao atao ny manalavitra ny hosoka amin'ny aterineto amin'ny fampiasana sasantsasany amin'ireo toro-hevitra ao amin'ity torolàlana ity. Azonao atao koahamerina ny fiarovana ny traikefa niainanao ary koa ireo antony hafa mahakasika ny fiarovana ny mpanjifanao.